विचार/दृष्टिकोण Archives - Page4of 28 - Purbeli News
काठमाडौँ / कतिपय निर्णयमा सामान्य मतभेद भएपछि शुरु भएको श्रीलङ्काको राजनीतिक सङ्कट अहिले अझ जटिल बन्दै गएको छ । राज्यका प्रमुख शक्ति केन्द्रमध्ये संसद् र अदालत एकातिर छन् भने अर्को प्रमुख शक्तिकेन्द्र राष्ट्रपति अर्को पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि सङ्कट थप जटिल बन्दै गएको हो । शक्ति सन्तुलन नमिल्दासम्म यो सङ्कट सजिलै समाधान हुने देखिएको छैन । ...
बढदो दुर्घटनाको जोखिम र यस्ले निम्त्याउने दुर्दशा !
नेपालमा दैनिक रुपमा दर्जनौ दुर्घटना हुने गरेका छन । त्यसमा कम्तिमा आधा दर्जन बढी मानिसले ज्यान गुमाउँछन भने दर्जनौ घाईते बन्ने गरेका छन । देशका बिभिन्न भेगमा दैनिक रुपमा बढदै गएको दुर्घटनाले मानबीय क्षतिका साथै आर्थिक रुपमा समेत ठुलो क्षति गर्दछ । दुर्घटनाका कारण अंगभंग हुने दुर्घटनाकै कारण पारिवारिक बिखण्डन हुने र आर्थिक रुपमा समेत ठुलो क्षति हु...
डिएसपी साहेव, नाका निगरानी किन सुस्त, कि सेटिङ्ग भयो !
करिब दश वर्ष भएछ मैले पत्रकारीता गरेको । अझ पूर्वी नाका काँकरभिट्टाको बारेमै केन्द्रित भएर लेख्न थालेको पनि पाँच वर्ष नाघेछ । यो बीचमा प्रहरी प्रशासनमा धेरै प्रमुखहरु फेरिए । सबैले नाकामा हुने चोरी, निकासी, तस्करी, मानव बेचबिखन निर्मुल गर्छु भन्दै आए । तर, अँह कसैले पनि लछार पाटो लगाउन सकेनन् । सबै त्यीनै तस्करहरुसँग मिलिरहे , आफ्नो गोजी भरिरहे ।...
चाडपर्वमध्ये मलाई तिहार विशेष लाग्छ। तिहारमा मनै आनन्दीत हुन्छ। सानै उमेरदेखि नै तिहारको झलिमिली, देउसी भैलोले मन रोमाञ्चित बनाउँथ्यो। अहिले पनि तिहारको सबै कुराले छुट्टै आनन्द दिने गर्छ। तिहारमा घर परिवारसँग समय दिने, दिदीभाई टिका लगाउने र देउसी खेल्न मलाई रमाइलो लाग्छ। तर, चिकित्सक भएपछि छुट्टी भन्ने हुँदो रहेनछ। बिदाको दिन पनि बिरामीको उप...
बिकृत बन्दै चाडपर्व,यसरी मनाऔँ तिहार हुन्न ?
ईटहरी । हिन्दु नेपालीहरुको दोस्रो ठुलो चाड तिहार घर आँगनमा भित्रिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म मनाइने यो चाड चान्द्रमास अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुक्ल द्वितीयासम्म पाँच दिन झिलीमिलीको पर्वका तिहार मनाउने गरिन्छ । यो पर्ब अन्र्तगत पहिलो दिन काग तिहार र दोस्रो दिन कुकुर तिहार मनाईसकिएको छ भ...
वरिषठ संस्कृतविद तथा इताहासकार डा जममान गुरूङ संस्कृत माषामा गहिराे दख्खल राख्ने व्यातित्व हुनुहुन्छ । नेपाली समाजकाे चालचलनवाराे गहिराे अध्ययन गरनुभएकाे छ ।हाम्रा संस्कृति मध्य तिहारकाे महत्व छ । याे कसरी सुरू भएकाे थियाे त । तिहार हाम्राे एउटा चाड हाे । हिन्दिमा तेउहारभनिन्छ । तेउहारले तिहार हाेइन सिंगै चाडपरव भन्ने जानाउछ उनिहरूकाेमा । उनीहर...
दसैँ यात्रा २०७५ : कष्टपूर्ण तर अविस्मरणीय यात्रा (यात्रानुभूति)
भोली गाउँको यात्रा गर्नुछ । निधारमा टीका, कानमा जमरा मात्रै नभई मनमा उत्साह सँगै एक प्रकारको आनन्द भईरहेको थियो कात्तिक २ गते शुक्रबार । पहिलो दिन : विहानै उठेर गाउँको यात्रा गर्नका लागि ममि, दाजु र म तयारी गरिरहेका थियौँ । बेल्टार, बङ्सिला घाट, चिसापानी हुँदै खोटाङ पुरानागाउँ सम्म पुग्नु छ । तरहराबाट ६ बजे गाडी चढ्यौँ बेल्टारको । गाडी इनरुवा...
राजन मेहताको राजनीति र इनरुवाको युवा भविष्य
नेपाली राजनीतिमा युवाको उपस्थिति र भविष्य सधैँ संशयको घेरामा रहँदै आएको छ । स्वभावैले यथास्थितिप्रति विद्रोही, समयानुकूल परिवर्तनको पक्षधर र स्वतन्त्र हुने हुँदा अघिल्लो पुस्ताले हत्तपत्त जिम्मेबारी दिन मन नपराउने भएकाले युवाको उपस्थिति र भविष्यमा नानाथरि आशङ्का जोडिने गरेको हो । तर पनि युवाले आफ्नो समयमा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सबै खाले...
बारम्बार महिला मात्रै बलात्कृत किन ?
आइतबार, कार्तिक ११, २०७५
संसारमा आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरु किन बलात्कारको सिकार हुनुपर्ने ? परम्परागत कुरिती र रुढीबादी सोचको कारण सदिऔ देखि महिलाहरू बलात्कृत भएका छन। महिलाहरु माथी हुने शारीरिक शोषण लाई मात्रै बलात्कार भन्ने गरिन्छ तर महिलाहरू माथी शारीरिक बलात्कार मात्रै होइन बिभिन्न किसिमका बलात्कार भइरहेको छ। सतिप्रथा जस्ता कहालिलाग्दो अन्धविश्वास बाट नेपाल मुक्त भए...
मोरङ । पछिल्लो समय नेपाली चाडपर्वहरु बिकृत बन्दै गएका छन । चाडपर्वहरुको आफनै महत्व रहेको छ । चाडपर्वमा हाम्रा संस्कार र संस्कृति समेत जोडिएको छ तरपनि चाडपर्वहरु पछिल्लो समय संस्कृति कम र बिकृति बढी बन्दै गएका छन । केही बर्षअघि सम्म चाडपर्वहरु आउँदा एकप्रकारको उत्साह र उमंग आउथ्यो,बर्षभरि मानिसहरु चाडपर्वको पर्खाइमा हुन्थे,टाढाका आफन्त सँग भेटघाट,बि...